Fifidianana · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Jolay, 2010
Mitady mihoatra noho ireo teny filamatry ny fifidianana ireo Aostraliana
Oseania 23 Jolay 2010
Telo ambiniroapolo andro katroka taorian'ny nialan'i Kevin Rudd, niantso fifidianana faobe amin'ny 21 Aogositra ny praiministray Julia Gillard, ny "ranga"-ntsika (menaloha). Mitady ventin-javatra tsy ahodina fotsiny amin'ity fampielezan-kevitra ity ny tontolon'ny blaogy Oz .
Eoropa Afovoany & Atsinanana 20 Jolay 2010
Afrika Mainty 13 Jolay 2010
Iraka: Iza no ho Praiministra manaraka?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 05 Jolay 2010
Tsy nahita marimaritra iraisana ho amina kandidà tokana hapetraka amin'ny toeran'ny Praiminisitra ireo vondrona roa maro an'isa lany tamin'ny fifidianana, na dia efa natao tamin'ny 7 Martsa aza ny fifidianana ny ho parlemanta irakiana. Manana izay lazainy koa momba ny fikatsoana ireo mpitoraka blaogy ao anatin'ity lahatsoratra ity .